नरिता एयरपोर्ट! टोकियोमा कसरी पुग्ने / अन्वेषण टर्मिनल १, २, - - Best of Japan
चिबा प्रान्तमा नरिता एयरपोर्ट, जापान = शटरस्टक
नरिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जापानको टोकियोको हनेडा एयरपोर्ट पछाडि दोस्रो सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। हनिडा एयरपोर्टको साथ नारीता एयरपोर्ट टोकियो मेट्रोपोलिटन हब एयरपोर्टको रूपमा पूर्ण रूपमा परिचालनमा छ। यदि तपाईं टोकियो मा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईं यी एयरपोर्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यस पृष्ठमा, म नरिता एयरपोर्टको बारेमा परिचय दिनेछु। नरिता एयरपोर्ट टोक्यो शहरको केन्द्रबाट धेरै टाढा छ, कृपया टोक्यो केन्द्रमा पहुँच जाँच गर्नुहोस्।
नरिता एयरपोर्ट वा हनेडा एयरपोर्ट?
जापान रेल पास प्राप्त गर्नुहोस्
नरिता एयरपोर्ट टोकियो
टर्मिनल १, २, Nar नारिता एयरपोर्टमा अन्वेषण गर्नुहोस्
टोकियो नरिता एयरपोर्ट (NRT) मा जापान एयरलाइन्स (JL) बाट विमानहरू। नरिता जापान एयरलाइन्स (JL) र सबै निप्पन एयरलाइन्स एएनए (NH) = शटरस्टकको लागि हब हो
अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र LCC आधार
बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ
टोकियो मेट्रोपोलिसको हनेडा एयरपोर्ट दक्षिण पश्चिम टोकियोमा र नरिता, चिबा प्रान्तको नरिता एयरपोर्टमा अवस्थित छ। त्यहाँ केवल हनेडा एयरपोर्ट मात्र हुन्थ्यो, तर १ 1960 s० को दशकमा जापानको आर्थिक विकास भयो र विमानका यात्रुहरूको संख्या द्रुत रूपमा बढ्यो। यस कारणले गर्दा, हनेडा एयरपोर्ट एक्लैले बढ्दो मागको सामना गर्न सकेन, र १ 1978 XNUMX मा नरिता एयरपोर्ट खोलियो। टोकियोको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नरीता एयरपोर्टमा सारियो र हनेडा एयरपोर्टलाई घरेलु उडानका लागि एयरपोर्टको रूपमा लिइयो।
जहाँसम्म, नरिता एयरपोर्ट टोक्योको सहरबाट 60० किलोमिटर टाढा सीधा रेखा दूरीमा पनि छ। यो टोकियो मेट्रोपोलिसको हब एयरपोर्टको रूपमा धेरै टाढा छ। यस बीच, हनेडा एयरपोर्टमा, त्यहाँ उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। हनेडाबाट आइपुग्ने र प्रस्थान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अब सञ्चालन भइरहेको छ। हनेडा एयरपोर्टमा एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन खोलियो।
LCC उडानहरू बढेको छ
नरिता एयरपोर्टमा नियमित उडानहरू बाहेक, त्यहाँ एलसीसी उडानहरूको संख्या बढ्दो छ। जेस्टार जापान र अन्य LCC कम्पनीहरूले नरिता एयरपोर्टलाई हब एयरपोर्टको रूपमा प्रयोग गर्न शुरू गरे। यसैले, नरिता एयरपोर्टले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको साथ LCC को बेस एयरपोर्टको पक्ष लिन शुरू गर्यो।
नरिता एयरपोर्ट टोकियो केन्द्रबाट टाढा छ
टोकियोमा हवाइजहाजबाट उडान गर्ने मानिसहरूले नरिता एयरपोर्ट वा हनेडा एयरपोर्ट प्रयोग गर्ने बारेमा सोच्न सक्छन्। निष्कर्षबाट, म सिफारिश गर्दछ यदि सम्भव भएमा हनेडा एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुहोस्। नरिता एयरपोर्ट एक राम्रो एयरपोर्ट हो तर यो टोकियो केन्द्रबाट धेरै टाढा छ।
यद्यपि नरिता एयरपोर्टको दुई फाइदा छन्। एउटा कुरा यो हो कि त्यहाँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू छन्। र अन्य यो कि शुल्क हेनेडा एयरपोर्टको उडानहरू भन्दा केही सस्ता छ। यदि यस क्षेत्रमा आकर्षक उडानहरू छन् भने, तपाईं नरिता एयरपोर्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यो अवस्थामा, तपाइँले नरिटा एयरपोर्टबाट टोकियो शहरको केन्द्र कसरी जाने भन्ने बारे आफ्नो रणनीति बनाउनु पर्छ। यदि तपाईं मुख्य स्टेशन जस्तै टोकियो स्टेशन, Shinjuku स्टेशन, शिबुया स्टेशन नजिकैको होटलमा बस्नुहुन्छ भने, म JR को "नरिता एक्सप्रेस" सिधा यी मुख्य स्टेशनहरूमा जान सिफारिस गर्दछु। यदि तपाईं पूर्वी टोकियो मा एक होटल मा रहनुहुन्छ जस्तै Ueno स्टेशन, Keisei रेलवे को "Skyliner" पनि सिफारिस गरीन्छ।
यदि तपाईं सस्तोमा यातायात लागत घटाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एक JR वा Keisei रेलवे ट्रेन वा बस लिन सक्नुहुनेछ। जे होस्, तिनीहरूले टोक्यो शहरको लागी समय लिने हुनाले, समयको साथ अघि बढौं।
>> नरिता एयरपोर्टको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
ठीक छ, म तपाईंलाई कसरी नरिता एयरपोर्टबाट टोक्यो पुग्ने देखाउँछु। यद्यपि त्यस भन्दा पहिले कृपया मलाई जापान रेल पास कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारे थोरै व्याख्या गर्न दिनुहोस्।
विदेशबाट आएका पर्यटकहरूले जेआर (जापान रेलवे समूह) द्वारा प्रदान गरिएको "जापान रेल पास" खरीद गर्न र प्रयोग गर्न सक्दछन्। जापान रेल पास जापान जाने अघि केवल भौचरहरू खरीद गर्न र जापानमा पुगे पछि यसलाई प्राप्त गर्ने एउटा प्रणाली हो। यदि तपाईं जापान रेल पास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं पहिले नारिता एयरपोर्टमा पुग्नुहुन्छ।
तपाईंले यसलाई प्राप्त गर्नका लागि लाइन अप गर्नुपर्नेछ ...
यदि तपाईं जापान रेल पास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पनि अतिरिक्त चार्ज बिना नरिता एक्सप्रेस बोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि धेरै दुर्भाग्यवस, यदि तपाईंले नरिता एयरपोर्टको जेआर स्टेशनहरूमा जापान रेल पास प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने, तपाईंलाई प्राय: प a्क्तिमा नै लाइन अप गर्नुपर्दछ। धेरै पर्यटकहरूले तपाई जस्तो जापान रेल पास प्राप्त गर्न को लागी कोशिश गर्नेछन्। तपाईंले करीव minutes० मिनेट कुर्नुपर्नेछ। केहि केसहरूमा तपाईले एक घण्टा वा बढी प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ।
यस कारणका लागि, केही पर्यटकहरूले नरिटा एयरपोर्टमा जापान रेल पास प्राप्त गर्दैनन् तर यसलाई टोकियोको शहरको केन्द्रमा प्राप्त गर्दछन्। र तिनीहरूले नरिता एक्सप्रेस को लागी भुक्तानी गर्छन् ...
मँ अब यस पृष्ठमा जेआर, केइसेइ रेलवे, लिमोजिन बस आदि बारे परिचय दिनेछु। निष्कर्षमा, मलाई लाग्छ कि टोकियोको शहरको केन्द्रमा जानको लागि जेआरको नरिता एक्सप्रेस प्रयोग गर्नु नै उत्तम हो। जहाँसम्म, यदि तपाई जापान रेल पास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यहाँ जोखिम छ कि तपाई सवारी हुनुभन्दा पहिले तपाईलाई लामो पर्खाइ दिइनेछ।
जापान रेल पास एक धेरै मुनाफादायी पास हो, तर जब तपाईं आइपुग्नुहुन्छ, त्यहाँ माथि जस्ता समस्याहरू छन्। कृपया त्यस कुराको बारेमा सचेत रहनुहोस्।
जेआर एक्सप्रेस "नरिता एक्सप्रेस": टोक्यो, Shinjuku, योकोहामा आदि जाने सुविधाजनक।
भित्र NEX (एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन) = शटरस्टक
यदि तपाईं नरिता एयरपोर्टबाट टोकियोको शहर केन्द्रमा जानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु JR को नारिता एक्सप्रेस (N'EX) प्रयोग गर्न। यो ले तपाईलाई नारिता एयरपोर्टबाट टोकियो स्टेशनमा fast 53 मिनेट जति छिटोमा लैजान्छ।
यो सीमित एक्सप्रेस १ 15 - minute० मिनेट अन्तरालमा सहि अपरेट हुन्छ। मूल्य 30,०२० येन (सामान्य कारहरू) नरिता एयरपोर्टबाट टोकियो स्टेशनसम्म। यदि तपाईं हरियो कार (प्रथम श्रेणी) प्रयोग गर्नुहुन्छ, उही भाग 3,020 येन हो। सबै सीटहरू आरक्षित छन्। एक अलग पृष्ठमा आधिकारिक वेबसाइटको समय सारिणी हेर्न तलको छवि क्लिक गर्नुहोस्।
एक अलग पृष्ठमा आधिकारिक वेबसाइटको समय सारिणी हेर्न तलको छवि क्लिक गर्नुहोस्
नरिता एक्सप्रेस निम्नलिखित स्टेशनहरु मा रोकिन्छ।
देखाउनुहोस्: स्टेशनहरूको सूची प्रदर्शन गर्न यो बटन क्लिक गर्नुहोस्
नरिता एयरपोर्ट टर्मिनल १ (नरिता एयरपोर्ट) स्टेशन
नरिता एयरपोर्ट टर्मिनल २ · ((एयरपोर्ट टर्मिनल २) स्टेशन
नरिता स्टेशन (आंशिक रूपमा रोकियो)
सकुरा स्टेशन (आंशिक रूपमा रोकियो)
योत्सुकाइदो स्टेशन (आंशिक स्टप)
चिबा स्टेशन (आंशिक रूपमा रोकियो)
मुसाशी कोसुगी स्टेशन
किता कामकुरा स्टेशन (मौसममा मात्र)
कामकुरा स्टेशन (मौसममा मात्र)
जुशी स्टेशन (मौसममा मात्र)
योकोसुका स्टेशन (मौसममा मात्र)
त्यहाँ ट्रेनहरू Shinagawa स्टेशन पछि निम्नलिखित स्टेशनहरूमा रोकिन्छ।
यसबाहेक, त्यहाँ रेलहरू शिनागावा स्टेशन पछि निम्नलिखित स्टेशनहरूमा रोकिन्छन्।
शनिबार र छुट्टीहरूमा रेलहरू छन् जुन माउन्ट नजिकै जान्छ। फुजी तिनीहरू Shinagawa स्टेशन पछि निम्न स्टेशनहरूमा रोकिन्छ।
माउन्ट फुजी स्टेशन
फुजी-क्यू हाइलैंड स्टेशन
नरिता एयरपोर्टमा दुई JR स्टेशनहरू छन्।
टर्मिनल भवनको बेसमेन्ट फ्लोरमा क्रमशः टिकट कार्यालय र टिकट गेट छ। तपाईं यहाँ जापान रेल पास पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि केइसी रेलवेको टिकट गेट पनि नजिक छ।
टर्मिनल को स्टेशन छैन। कृपया टर्मिनल २ लाई नि: शुल्क बसमा सार्नुहोस् र भूमिगत नरिता एयरपोर्ट टर्मिनल २ · ((एयरपोर्ट टर्मिनल २) स्टेशन प्रयोग गर्नुहोस्।
नरिता एयरपोर्ट टर्मिनल २ · station स्टेशन टर्मिनल २ मा छ। यस स्टेशनको जापानी संकेतन "एयरपोर्ट टर्मिनल २" हो। यद्यपि, "" "अंग्रेजी संकेतनमा थपियो। मलाई लाग्छ कि यो अंग्रेजी संकेतन नराइता एयरपोर्ट नचिनेका मानिसहरुको लागि क्रूर छ।
>> नरिता एक्सप्रेसको विवरणको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्
Keisei लिमिटेड एक्सप्रेस "Skyliner": Ueno मा जान सजिलो आदि।
Skyliner एक सीमित एक्सप्रेस एयरपोर्ट ट्रेन सेवा नरिता अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बाट टोक्यो = शटरस्टक सम्म छ
टोकियो, जापानमा मे १,, २०१ 19 मा केइसी स्काइलाइनरको आन्तरिक। स्काइल्यान्डर जापानको टोकियो र नरिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीचको सीमित एक्सप्रेस एयरपोर्ट ट्रेन सेवा हो = शटरस्टक
केइसी रेलवे चिबा प्रान्तमा एक निजी रेल हो। केइसी रेलवेको मार्ग रेखाचित्र तलको छविमा देखाइएको छ। यस छविमा क्लिक गर्नुहोस्, आधिकारिक वेबसाइट र समय सारिणीको मार्ग नक्शा एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ।
केइसेइ रेलवेले १yo० किलोमिटर प्रति घण्टाको सीमित एक्सप्रेस "स्काइलेनर" संचालन गर्दछ। यदि तपाईं स्काइलेनर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं टोकियोको शहरको केन्द्रमा जेआरको नरिता एक्सप्रेस भन्दा पहिले जान सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं निप्पोरी स्टेशनमा स्काइलेनरबाट बाहिर निस्कनुभयो भने, तपाईं JR Yamanote लाइनमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। नरिता एयरपोर्ट टर्मिनल २ - ((एयरपोर्ट टर्मिनल २) स्टेशन निप्पोरी स्टेशनबाट minutes 160 मिनेटमा छ। नरिता एयरपोर्टबाट निप्पोरी र केइसी यूनो स्टेशनहरूको शुल्क प्रति वयस्क २,2० येन हो। सबै सीटहरू आरक्षित छन्।
यद्यपि स्काईनर नरिता एक्सप्रेस जत्तिको धेरै स्टेशनहरूमा जान सक्दैन। स्काइलेनर पूर्वी टोकियोको निप्पोरी स्टेशन र केइसी यूनो स्टेशनमा रोकिन्छ। निप्पोरी स्टेशन एक स्टेशन हो कि JR यामानो रेखा लाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर यो टोकियो स्टेशन र Shinjuku स्टेशन बाट टाढा छ। Keisei Ueno स्टेशन JR Ueno स्टेशन बाट १० मिनेट पैदल अवस्थित छ। अर्को शब्दहरु मा, जब तपाईं Skyliner प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं शहरको केन्द्रमा यात्रा गर्न समय लिन सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि, यदि तपाईं निप्पोरी र युनोको नजिकको होटेलमा बस्न चाहनुहुन्छ भने, स्काइलेयर उत्तम हो।
यस छविमा क्लिक गर्नुहोस्, आधिकारिक वेबसाइट र समय सारिणीको मार्ग नक्शा एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ
Skyliner अर्को स्टेशन मा रोकिन्छ।
केइसेइ रेलवेका पनि नरिता एयरपोर्टमा दुई स्टेशनहरू छन्।
जेआर जस्तै, त्यहाँ टर्मिनल भवन को तहखाने मा क्रमशः टिकट कार्यालय र टिकट गेटहरु छन्। यो JR पछि छ।
टर्मिनल को केइसी रेलवेमा स्टेशन पनि छैन। नरिता एक्सप्रेस जस्तै, कृपया टर्मिनल २ मा निःशुल्क बस प्रयोग गर्नुहोस् र भूमिगत नरिता एयरपोर्ट टर्मिनल २ · ((एयरपोर्ट टर्मिनल २) स्टेशन प्रयोग गर्नुहोस्।
पहुँच एक्सप्रेस सस्तो र सिफारिस गरिएको छ
Skyliner को थप बाहेक, Keisei रेलवे धेरै सीमित एक्सप्रेस ट्रेनहरु का संचालन गर्दछ। ती मध्ये, एक धेरै व्यावहारिक र सिफारिश एक्सप्रेस ट्रेन छ। त्यो "एक्सेस एक्सप्रेस" हो।
एक्सेस एक्सप्रेस को उपयोग गरेर, तपाईं लगभग i० मिनेटमा नरिता एयरपोर्टबाट केइसी यूनो स्टेशन पुग्न सक्नुहुनेछ। यसले केहि समय लिन सक्दछ। यद्यपि यसलाई एक्सप्रेस चार्जको आवश्यक पर्दैन। त्यसो भए, نرिता एयरपोर्टबाट केइसी यूनो स्टेशनको लागि प्रति वय १,०70० येन। मलाई लाग्छ कि केइसी रेलवेको एक्सेस एक्सप्रेस सीमित एक्सप्रेस ट्रेन हो जुन उत्तम लागतको प्रदर्शनको साथ छ।
>> केइसी रेलवेका विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
बस: सम्पूर्ण टोकियोमा सिधा। सस्तो तर ट्राफिक जामको जोखिम
टोक्यो = शटरस्टकमा लिमोजिन बस जाँदै
बस तपाईलाई मिल्ने बस भेटौं
नरिता एयरपोर्टमा यती धेरै बसहरू सञ्चालित छन्। तपाईं यी सबै बसहरू खोज्न सक्नुहुन्छ नरिटा एयरपोर्टको आधिकारिक वेबसाइटको निम्न पृष्ठमा। भर्खरै, त्यहाँ नरिटा एयरपोर्टबाट सिधै क्योटो, सेन्दै र कनाजावा जस्ता टाढाका शहरहरूमा जाने बसहरूको संख्या बढेको छ। कृपया तपाईको लागि उपयुक्त बस खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्।
>> नरिता एयरपोर्टमा बसहरूको विवरणका लागि कृपया यहाँ हेर्नुहोस्
सस्तो बसहरू सिफारिस गरिन्छ
यदि तपाईं टोकियो स्टेशनको वरपरको होटेलमा बस्न चाहनुहुन्छ भने, म सस्तो बसहरू प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। यदि तपाईं टोकियो स्टेसनमा नियमित लिमोसिन बस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, एक तर्फी भाडामा प्रति वयस्क करीव 3,000,००० येन लाग्छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं सस्तो बसहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसको लागि प्रति व्यक्ति १,००० येन खर्च हुन्छ। यी बसहरू पनि व्यस्त छन्। यद्यपि यी बसहरूले प्रति व्यक्ति एक मात्र सुटकेस बोक्न सक्छन्। यदि तपाईं दुई वा बढि ठूला सूटकेसहरू ल्याउनुहुन्छ, वा लामो सामानहरू जस्तै सर्फबोर्ड ल्याउनुहुन्छ भने, तपाईं नियमित लिमोसिन बस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
मँ माथिको भिडियोमा देखिएको "The पहुँच नरिता" नामको सस्तो बस सिफारिस गर्दछु। यो बस Narita एयरपोर्ट र टोकियो स्टेशन / Ginza स्टेशन बीच संचालित छ। एक तर्फको लागि मूल्य प्रति वयस्क १ येन। बच्चाहरू आधा मूल्य हुन्।
नरिता एयरपोर्टबाट छुट्ने थुप्रै बसहरूले विमानमा चढ्नु अघि एयरपोर्टको काउन्टरमा टिकट किन्नु पर्छ। यसको विपरित, पहुँच নারिताको मामलामा, तपाईंले टिकट किन्नु पर्दैन। तपाइँ प्रति व्यक्ति १,००० येन तयार गर्नुपर्दछ। कृपया तपाईं यस बसमा चढ्नुभयो भने १,००० येन ड्राइभरलाई दिनुहोस्।
यो बस एक दिनमा १142२ पटक अपरेट हुन्छ। यो दिनको चरम घण्टाको दौडान प्रत्येक १ minutes मिनेटमा चल्दछ। समस्या टोकियो स्टेशन को यात्रा को समय हो। यो आधिकारिक वेबसाइट मा एक घण्टा को लागी भनिन्छ। यद्यपि रेलहरू जस्तो नभई बसहरू ट्राफिक भीडको जोखिममा छन्। कृपया सोच्नुहोस् कि जब यो सडक भीड हुन्छ अधिक समय लाग्छ।
>> पहुँच नारिताको आधिकारिक साइट यहाँ छ
त्यहाँ एक सस्तो बस छ टोकियो शटल नरिटा एयरपोर्टमा। यसले नरिता एयरपोर्ट र टोकियो स्टेशन / गिन्जालाई पनि जोड्दछ। टोकियो शटल एक तरीकाले वयस्क भाडा प्रति व्यक्ति १,००० येन छ। यदि तपाइँ गृहपृष्ठमा अग्रिम बुक गर्नुहोस्, भाडा are ०० येन हुनेछ। यद्यपि तपाई तालिका भन्दा नरिटा एयरपोर्टमा आउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले म बुकिंग गर्न सिफारिस गर्दिन।
यो बस पनि धेरै चलाउँछ। मूल रूपमा यो हरेक २० मिनेटमा चल्छ। कृपया एयरपोर्टको काउन्टरमा बस टिकट किन्नुहोस् र अघि बढ्नुहोस्।
>> टोकियो शटलको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
ट्याक्सी: यो टोकियो केन्द्रीय जान लगभग २०,००० येन लाग्छ
नरिता अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट = शटरस्टकमा जापानी महिला कल ट्याक्सीको लागि प्रतिक्षा गर्दै
यदि तपाईं नरिता एयरपोर्टबाट टोकियो शहरको केन्द्रमा जानुहुन्छ भने, म ट्याक्सी प्रयोग गर्न धेरै सिफारिस गर्न सक्दिन। यो Nar० किलोमिटर भन्दा टाढा हो नरिटा एयरपोर्टबाट टोकियोको शहरको केन्द्रसम्म। ट्याक्सी भाँडा करिब २०,००० येन खर्च हुनेछ। थप रूपमा, एक्सप्रेसवे शुल्क थपिनेछ। यदि सडक जम्मा गरिएको छ भने, यसले अधिक लिन सक्दछ।
यदि तपाईं ट्याक्सी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, म फिक्स फ्यायर ट्याक्सी चढ्ने सल्लाह दिन्छु। यदि तपाईं फिक्स्ड फ्यायर ट्याक्सी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई उच्च शुल्क लाग्नेछैन यदि सडक भारी जम्मा भए पनि। फिक्स्ड फ्यायर ट्याक्सी प्रयोग गर्नको लागि, कृपया प्रत्येक टर्मिनल भवनको ट्याक्सी स्ट्यान्डमा क्लर्कलाई बताउनुहोस्।
>> नरिता एयरपोर्ट ट्याक्सीको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्
नरिता एयरपोर्ट। JAL विमान = शटरस्टक
जापानमा नरिता एयरपोर्ट टर्मिनल २ मा युनिक्लो स्टोर
यात्री टर्मिनलहरू एलायन्सको आधारमा विभाजित हुन्छन्। सामान्यतया, टर्मिनल १ को उत्तरी विing स्काईटाम सदस्य कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दछ, र टर्मिनल १ दक्षिण विंग स्टार एलायन्स सदस्य कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दछ। टर्मिनल २ एक विश्व सदस्य कम्पनीहरू द्वारा प्रयोग गरीन्छ। टर्मिनल L LCC कम्पनीहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ। जे होस्, कृपया सावधान रहनुहोस् कि त्यहाँ धेरै अपवादहरू छन्। मैले तल प्रत्येक टर्मिनलका लागि एयरलाइन्सको सूची तयार गरें। प्रत्येक टर्मिनलको उडानहरू प्राय: परिवर्तन हुन्छन्, तर यदि तपाईं निम्न डाटालाई मोटा गाईडको रूपमा सन्दर्भ गर्नुहुन्छ भने मँ खुसी छु।
टर्मिनल १ को नक्शा: अलग पृष्ठमा नरिता एयरपोर्टको आधिकारिक वेबसाइट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
टर्मिनल १ एक ठूलो भवन हो जसमा विभिन्न पसल र रेस्टुरेन्टहरू छन्। त्यहाँ घर इलेक्ट्रोनिक्स स्टोर "Laox", कपडा स्टोर "UNIQLO", र अन्य छन्। पछिल्लो स्टोर जानकारीका लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
>> टर्मिनल १ स्टोर जानकारी को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
उत्तर विंग (केवल अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू)
शो: उडानहरू हेर्नको लागि यो बटन क्लिक गर्नुहोस्
कोरियाली एयर (KE): सियोल / इनचान, बुसान, जेजु, होनोलुलु, सियोल / इनचान
चीन दक्षिणी एयरलाइन्स (CZ): डालियान, चाg्गचुन, शेन्या Z, झेंग्झु, हरबिन, चांग्शा
ज़ियामेन एयर (MF): ज़ियामेन, फुजौ
सिचुआन एयरवेज (3U): चेंगदू
ह Hongक Kong एयरलाइन्स (HX): हङकङ
भियतनाम एयरलाइन्स (VN): हनोई, हो ची मिन्ह सिटी, दा नांग
थाई · सिंह · एयर (SL): बैंकक / डॉन मुआang
गरुड इन्डोनेशिया एयरलाइन्स (GA): Denpasar
इतिहाद एयरवेज (EY): अबू धाबी
डेल्टा एयर लाइन्स (DL): मनिला, सिंगापुर, अटलान्टा, डेट्रोइट, पोर्टलैंड, सिएटल, होनोलुलु
एरोमेक्सिको एयरलाइन्स (AM): मेक्सिको सिटी
एयर फ्रान्स एयर (एएफ): पेरिस / चार्ल्स डे गउले
KLM डच एयरलाइन्स (KL): एम्स्टर्डम
अलिटालिया - इटाली उड्डयन (AZ): रोम / Fiumicino, मिलान / माल्पेन्सा
एरोफ्लट / रूसी एयरलाइन्स (SU): मस्को / शेरेमेतिभो
अरोरा एयरलाइन्स (HZ): व्लादिभोस्टोक, युझ्नो-साखलिन्स्क
याकुत्स्क एयरलाइन्स (R3): युजनो-सखलिन्स्क
एयर क्यालेडोनिया अन्तर्राष्ट्रिय (SB): नौमेआ
सबै निप्पन एयरवेज (NH): ताइपे / ताओयुआन, बेइजि / / क्यापिटल, शंघाई / पुडोंग, डालियान, किing्गदाओ, गुआन्झाउ, शेन्यांग, ह Hang्गजो, ज़ियामेन, चेng्गदू, वुहान, ह Hongक Kong, मनिला, हो ची मिन्ह सिटी, नोम पेन्ह, बैंकक / सुवर्णभूमि, क्वालालम्पुर, सिंगापुर, याang्गुन, जकार्ता, दिल्ली, मुम्बई, न्यू योर्क / जोन एफ। क्यानेडी, वाशिंगटन / डुल्स, शिकागो / ओ'हारे, लस एन्जलस, स्यान फ्रान्सिस्को, सिएटल / टाकोमा, सान जोस, ह्युस्टन / इंटरकन्टिनेन्टल, मेक्सिको सिटी, डसेल्डोर्फ, ब्रसेल्स, होनोलुलु, पर्थ (सेप्टेम्बर २०१ from बाट)
एयर जापान (NQ): ह Hongक Kong, होनोलुलु
ईवा एयर (BR): ताइपे / ताओयुवान, काओसुsi
एशियाना एयरलाइन्स (OZ): सियोल / इनचान
एयर सियोल (आरएस): सियोल / इनचान
एयर बुसान (BX): बुसान, डेगु
चीन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स (CA): बेइजि / / क्यापिटल, शंघाई / पुडोंग, डालियान, टियानजिन, चेdu्गदू, चong्गचिंग, हzhou्जाउ, जिनिंग (चेng्गदु मार्फत)
शेन्ज़ेन उड्डयन (ZH): शेन्जेन
MIAT मंगोलियन एयरलाइन्स (OM): उलानबाटर
थाई एयरवेज (TG): बैंकक / सुवर्णभूमि
सिंगापुर एयरलाइन्स (SQ): सिंगापुर, लस एन्जलस
उज्बेकिस्तान एयरलाइन्स (HY): ताशकहरुट
टर्की एयरलाइन्स (TK): इस्तानबुल / एटाटर्क
संयुक्त एयरलाइन्स (युए): न्यू योर्क / नेवार्क, वाशिंगटन / डुल्स, शिकागो / ओ'हारे, डेन्वर, लस एन्जलस, सान फ्रान्सिस्को, ह्युस्टन / इन्टरकन्टिनेन्टल, होनोलुलु, गुआम
एयर क्यानाडा (एसी): भ्याकूवर, क्यालगारी, टोरन्टो, मोन्ट्रियल
अस्ट्रियन एयरलाइन्स (ओएस): भियना
स्विस अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स (LX): ज्यूरिख
लट पोलिस एयरलाइन्स (LO): वरस
स्कान्डिनेभियाई एयरलाइन्स (SK): कोपेनहेगन
न्यूजील्याण्ड एयरलाइन्स (NZ): अकल्याण्ड
इजिप्टियन एयरवेज (एमएस): कायरो
इथियोपियाली एयरलाइन्स (ET): सियोल / इनचान, अदिस अबाबा (सियोल / इनचान मार्फत)
सबै निप्पन एयरवेज (एएनए): सप्पोरो / नयाँ चिटोज, सेन्दै, निगाता, नागोया / चुबु, ओसाका / इटामी, फुकुओका, ओकिनावा / नाहा
पीच (एपीजे): सप्पोरो / नयाँ चिटोज (सेप्टेम्बर, २०१ From), ओसाका / कन्साई, फुकुओका, अमामी (अक्टोबर २०१ from देखि), ओकिनावा / नाहा (जुन २०१ 2019 देखि), इशिगाकी (२०१ 2019 को जाडोदेखि)
IBEX एयरलाइन्स (IBX): सेन्दै (जुलाई २०१ 2019 बाट), कोमात्सु, हीरोशिमा
टर्मिनल २: छुट्टै पृष्ठमा नरिता एयरपोर्टको आधिकारिक वेबसाइट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
टर्मिनल २ का विभिन्न पसल र रेष्टुरेन्टहरू पनि छन्। त्यहाँ घर इलेक्ट्रोनिक्स स्टोर "बिक क्यामेरा", कपडा स्टोर "UNIQLO", र अन्य छन्। पछिल्लो स्टोर जानकारीका लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
जापान एयरलाइन्स (JW): ताइपे / ताओयुआन, काओसिung, बुसान, बेइजि / / राजधानी, शंघाई / पुडोंग, डालियान, ह Hongक Kong, मनिला, हनोई, हो ची मिन्ह सिटी, बैंकक / सुवर्णभूमि, कुआलालम्पुर, सिंगापुर, जकार्ता, दिल्ली, न्यूयोर्क / जोन एफ केनेडी , बोस्टन, शिकागो / ओ'हारे, डल्लास / फोर्ट वर्थ, लस एन्जलस, स्यान डिएगो, सिएटल (मार्च २०१ from बाट), भ्यानकुभर, फ्रान्कफर्ट, हेलसिंकी, मस्को / डोमोडेडोभो, होनोलुलु, कोना, गुआम, सिड्नी, मेलबोर्न
चीन एयरलाइन्स (CI): ताइपे / ताओयुआन, काओसिंग, होनोलुलु (मौसमी रूपमा संचालित)
मन्डारिन एयरलाइन्स (AE): ताइचुंग
टाइगर एयर ताइवान (IT): ताइपे / ताओयुवान, काओसुsi
इस्टर एयरलाइन्स (ZE): सियोल / इनचान
चिया वे एयरलाइन्स (TW): सियोल / इनचान, डेगु, जेजु
चीन पूर्वी एयरलाइन्स (MU): बेइजि / / राजधानी, शंघाई / पुडोंग, नानजिj, जियान
हेनान एयरलाइन्स (HU): जियान
क्याथे प्रशान्त एयरवेज (CX): ह Hongक Kong, ताइपे / तायोयु
ह Hongक Kong एक्सप्रेस (UO): हङकङ
मकाउ एयरलाइन्स (NX): मकाउ
फिलिपिन्स एयरलाइन्स (PR): मनिला, सेबु
सेबु प्रशान्त एयरवेज (5J): मनिला, सेबु
Bettjet एयर (VJ): हनोई
थाई · एयर एशिया एक्स (XJ): बैंकक / डॉन मुआang
नक स्कुट (XW): बैंकक / डॉन मुआang
मलेसिया एयरलाइन्स (MH): कुआलालंपुर, कोटा किनाबालु
एयरएशिया एक्स: कुवलालम्पुर
स्कूट (TR): ताइपे / ताओयुआन, बैंकक / डॉन मुआang, सिंगापुर (ताइपे / ताओयुआन, बैंकक / डॉन मुआंग मार्फत)
एयर इंडिया (एआई): दिल्ली
श्रीलंका एयरलाइन्स (UL): कोलम्बो
इमिरेट्स एविएशन (EK): दुबई
कतार एयरवेज (QR): दोहा
अमेरिकी एयरलाइन्स (AA): डलास / फोर्ट वर्थ, शिकागो / ओ'हारे, लस एन्जलस
हवाई एयरलाइन्स (HA): होनोलुलु
ब्रिटिश एयरवेज (BA): लन्डन / हीथ्रो
इबेरिया एयरलाइन्स (IB): मैड्रिड
S7 उड्डयन (S7): भ्लादिवोस्तोक, खबारोव्स्क, इर्कुट्स्क, नोवोसिबिर्स्क
Qantas (QF): ब्रिस्बेन, मेलबोर्न
फिजी एयरवेज (FJ): Nadi
एयर ताहिती नुई (TN): पापिटे
जापान एयरलाइन्स (JAL): सप्पोरो / शिन Chitose, नागोया / Chuu, ओसाका / Itami, फुकुओका
टर्मिनल L LCC उडानहरू स्वीकार गर्न नयाँ सुविधा खोलिएको छ। यस कारणले त्यहाँ धेरै पसल र रेष्टुरेन्टहरू छैनन्। यसको सट्टामा, टर्मिनल3सँग ठूलो फूड कोर्ट छ। पछिल्लो स्टोर जानकारीका लागि कृपया तल आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
जेत्स्टार जापान (GK): ताइपे / ताओयुआन, शंघाई / पुडोंग, ह Hongक Kong, मनिला
भेनिला एयर (JW): ताइपे / ताओयुआन (अक्टोबर २०१ until सम्म), काओसिंग (सेप्टेम्बर, २०१ until सम्म), ह Hongक Kong (मे २०१ until सम्म)
पीच (MM): ताइपे / ताओयुआन (२०१ 2019 को जाडोबाट), काओसिंग (२०१ 2019 को जाडोबाट)
जेस्टार जापान (JJP): सप्पोरो / न्यू चिटोज, ओसाका / कन्साई, ताकामात्सु, मत्सुयामा, कोची, फुकुओका, नागासाकी, ओइटा, कुमामोटो, मियाजाकी, कागोशिमा, ओकिनावा / नाहा, शिमोजिजिमा (मार्च २०१ From बाट)
भेनिला एयर (VNL): सप्पोरो / नयाँ चिटोज (अगस्त २०१ until सम्म), हाकोडाटे (मार्च २०१ until सम्म), अमामी (अगस्ट २०१) सम्म), ओकिनावा / नाहा (मे २०१) सम्म), इशिगाकी (सेप्टेम्बर २०१ 2019 सम्म)
वसन्त एयरलाइन्स जापान (SJO): सप्पोरो / न्यू चिटोज, हिरोशिमा, सागा
मैले जापानी सिम कार्ड र पॉकेट वाइफाइ भाडामा निम्न लेखहरू लेखें। तपाईं यी नरिटा एयरपोर्टमा पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। विवरणहरूको लागि, कृपया तलको लेख क्लिक गर्नुहोस्।
टोक्यो मा पर्यटन जानकारी को बारे मा कृपया निम्न लेख मा हेर्नुहोस्।